RADO – Zoma 3 Oktobra 2008 @ 8 ora alina FPMA 16 rue Chauchat 75009 – Paris FANOMPOAM-PIVAVAHANA IRAISAM-PINOANA 1 octobre, 2008
Posté par rahelys dans : Anniversaire,Culture,Hommages,Identité malgache,poèmes,Prieres,Solidarité	, ajouter un commentaire
01.10.2008 - 01.10.1923 85 taona nahaterahan’i
RADO – ANDRIAMANANTENA Georges
Manasa antsika rehetra hanatrika ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana hofanomezam-boninahitra an’Andriamanitra sy ho fampaherezana ny fianakaviana
sady ho fahatsiarovana ny faha-85 taona nahaterahany.
ny Zoma 03 Oktobra 2008 amin’ny 8 ora alina
ao amin’ny FPMA Paris, 16 rue Chauchat 75009 – Paris
VONINKAZO ADALADALA (FAHA-80 TAONAN’I RADO)
Efa tapitra matory… ! Izy irery no mifoha.
80 TAONA anio i RADO (Georges Andriamanantena)
1 oktobra 1923 – 1 oktobra 2003
Anio no mitsingerina ny faha 80 taona nahaterahan’i Georges Andriamanantena, diso fantatra loatra amin’ny anarana hoe RADO. Isan’ireo olona ambara ho andrarezin’ny fanandratana ny teny Malagasy sy fikajiana ny soa toavina izay mampiavaka an’i Madagasikara eo anatrehan’izao tontolo izao ny tenany.
Tononkalo sy asa-soratra maro no fantatra fa nosoratan’i Rado eo amin’izay fanandratana ny teny sy ny maha Malagasy azy izay. Amin’izao tsingerin-taona faha 80 n’i Rado izao dia manolotra firariantsoa sy fiarahaba ho azy manokana izahay eto amin’ny » Gazetiko « …- Gazetiko du 01-10-03